Nyanzvi dzeUpfumi Dzoshora Danho reRBZ Rekuisa Mamwe maBond Note – 263AfricaNews-Patrick_Manase
Nyanzvi dzeUpfumi Dzoshora Danho reRBZ Rekuisa Mamwe maBond Note
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti danho riri kunzi riri kuda kutorwa nebhanga guru renyika rekuwedzera mari yema bond note harishandi sezvo chiri kudiwa pari zvino kuri kugadzirisa dambudziko riri kupa kuti mari inetse munyika.
Doctor Prosper Chitambara, avo vanoshanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti kana Reserve Bank of Zimbabwe yakaisa mamwe ma bond note mumusika inenge yangogadzirisa dambudziko rekushaikwa kwemari munyika kwenguva duku.
Nemusi weSvondo bepanhau reSunday News rakati RBZ ichadira mari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora mumusika mukati memasvondo maviri ari kutevera.
Asi Doctor Chitambara vanoti chave kudiwa kugadzirisa dambudziko kubva pamwongo chaipo, kuburikidza nekumutsiridza nzira dzinounza mari munyika dzakaita sekumutsiridza maindasitiri.
“Zviri kuitwa neRBZ hazvisi kuenda pamwongo wedambudziko, saka zvinogona kumboderedza dambudziko mbichana. But zvinogona kutozotipa mamwe ma problems nekuti tiri kuisa mari mumusika but mari iyi haisi kusapotwa ne real economy ne production,” Doctor Chitambara vanodaro.
Vanoti izvi zvinogona kupedzisira zvave kupa matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu, uye kuwedzera kutengeswa kwemari pamusika mutema.
Bepanhau iri rakati mari iyi iri kutsigirwa neAfrican Export-Import Bank, sezvakangoitika muchikamu chekutanga chema bond note anokosha mamiriyoni mazana maviri emadhora.
Izvi zvinenge zvave kureva kuti mari yema bond note inenge yave mumusika inenge yosvika ku $500 million.
Dambudziko remari rinonzi riri kutowedzera zuva nezuva munyika, sezvo ma bond note asisawanikwewo, asi achinzi ari kutengeswa mumisika mitema.
Studio 7 yakundikana kubata gavhuna veRBZ, Doctor John Mangudya, kuti tinzwewo divi ravo panyaya.
← AmaKhumalo conference and Ndebele historians dismiss Nyamande claims
Watchdog zooms in on Zimbabwe’s missing $15 billion →
Vanhukadzi Vokurudzirwa Kupinda Mubhizinesi reZvicherwa kuMusangano weMine Entra
Kunyoresa Kuvhota Kwokonzera Mutauro Munyika